औषधि विज्ञानलाई झुक्याउँदै कोरोना निको भएर फर्किएकामा साढे दुई महिनापछि पुन: पोजेटिभ ! – Butwal Sandesh
औषधि विज्ञानलाई झुक्याउँदै कोरोना निको भएर फर्किएकामा साढे दुई महिनापछि पुन: पोजेटिभ !
विश्वमै म*हामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस हाल ३४ लाखभन्दा बढी मानिसमा सं*क्रमण भएको छ । अहिलेसम्म यो भाइरसका कारण विश्वभर २ लाख ३९ हजार ६१४ जनाको ज्या न गइसकेको छ ।
निको भएर घर फर्किएका कोरोना भाइरस सं*क्रमित दक्षिण कोरिया, भियतनाम र चीनमै पनि पुन: पोजिटिभ देखिरहेको अवस्थामा अनुसन्धानकर्ताहरुले यो दावी गरेका हुन् । चिनिँया अनुसन्धानकर्ताहरुका अनुसार कोरोना फोक्सोमा लामो समयसम्म रहिरहन सक्छ । सामान्यरुपमा नमुना लिँदा कोरोना भाइरस लुकेको हुनसक्ने देखिन्छ ।
चीनको एक आयुर्वेदिक विश्वविद्यालयका शोध प्रमुख कोरोना सं*क्रमित एक ७८ वर्षीया वृद्धालाई ३ पटकसम्म कोरोना भाइरस नेगेटिभ देखिएपछि अस्पतालबाट डिस्चार्ज गरेको थियो । तर केही समयपछि ती महिलामा फेरि कोरोना पोजेटिभ देखिएको पुष्टि भएको छ ।
ती वृद्धालाई २७ जनवरीमा अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । १३ फेब्रुअरीमा अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएको अर्को दिन नै हृ*दयघातबाट मृ*त्यु भयो । ती महिलाको पोष्ट मार्टम गर्दा लिभर, मुटुमा कोरोनाको सं*क्रमण देखिएन तर फोक्सोमा कोरोना भाइरसका स्ट्रेन देखियो । यसलाई माइक्रोस्कोपले हेर्दा कोरोना भएको पुष्टि भएको थियो।